मौज्दातमा रहेको खोप सकिएकाले काठमाडौंमा खोप अभियान स्थगित - Aarthik Sanjal
चीनबाट थप खोप आएपछि खोप अभियानले निरन्तरता पाउने
काठमाडौं । चीनबाट खोप आउने बित्तिकै खोप अभियानले निरन्तरता पाउने भएको छ । मौज्दातमा रहेको खोप सकिएकाले काठमाडौंमा खोप अभियान स्थगित भएको छ ।
अरु जिल्लाहरुमा प्रशासन र पालिकाको समन्वयमा केन्द्र र दिन निर्धारण गरेर खोप लगाउने काम भइरहेको छ । आउँदो ७ गतेपछि फेरि चीनबाट खोप आउन थाल्ने भएकाले अभाव नहुने खोप शाखा प्रमुख डा. झलक शर्मा गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
खोप आउने बित्तिकै यस अघि छुट्याइएको प्राथमिकता अनुसार उमेर र समूहको आधारमा खोप लगाइने डा. गौतमले बताउनुभयो । यसअघि अर्को लटको खोप लिन नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज अस्ति चीन जाने भने पनि जहाजको तालिका परिवर्तन गरेर एक हप्ता पर सारिएको हो ।निगमले आउँदो ६ गतेदेखि तीन उडान मार्फत नियमित खोप ल्याइने जनाएको छ ।
निगमका अनुसार चीनसँग खरिद गरिएका खोप लिन ६ गते गएर ७ गते बिहान खोप लिएर जहाज नेपाल आउने छ । यस्तै साउन ७ गते फेरि जहाज गएर साउन ८ गते र साउन ९ गते गएर जहाजले साउन १० गते खोप नेपाल ल्याउने छ ।
यसअघि असार २५ गते आठ लाख मात्रा खोप चीनबाट ल्याइएको थियो । यसैगरी सरकारले खरिद गर्ने बाहेक कोभ्याक्स सुविधा मार्फत पनि खोप ल्याइरहेको छ । नेपालमा अहिलेसम्म ६५ लाख ८२ हजार ८५० मात्रा खोप आइसकेको छ । सरकारले १८ वर्षभन्दा माथिका दुई करोड २० लाख जनसङ्ख्यालाई खोप लगाउने लक्ष्य लिएको छ ।
२ साउन २०७८, शनिवार ०७:४० बजे प्रकाशित